Twitter dia handefa fepetra vaovao telo hisorohana ny fanorisorenana ao amin'ny tambajotra sosialy | Vaovao IPhone
Twitter dia handefa fepetra vaovao telo hisorohana ny fanorisorenana ao amin'ny tambajotra sosialy
Volana vitsivitsy lasa izay dia teo am-bavan'ny orinasam-teknolojia maro ny Twitter, orinasa izay naneho fahalianana amin'ny fahazoana ny tambajotra sosialy microbloggin, saingy araka ny fantatsika rehetra, tsy nisy na iray aza tamin'ireo orinasa nanamafy ny fahalianany. Ny olana lehibe hitan'izy ireo dia ny isan'ny troll izay mandehandeha malalaka ao amin'ny Twitter, ambaratonga tsy azo ekena ho an'ny ankamaroan'ny mpandray anjara. Hatramin'ny nahatongavan'i Jack Dorsey ho CEO an'ny orinasa efa ho roa taona lasa izay, i Dorsey dia nifantoka tamin'ny fandefasana endrika vaovao hanandramana hametra ny fisiany ao amin'ny Twitter, saingy toa tsy ampy izany.
Vao avy nanambara ny Twitter fa hanampy fepetra vaovao telo hiadiana amin'ny fanorisorenana mahazo ny mpampiasa maro miorina amin'ny heverina ho anarana tsy fantatra anarana anoloran'ity tambajotra sosialy ity antsika. Inona koa Tian'izy ireo ny hahatonga ny Twitter ho toerana azo antoka kokoa ho an'ireo mpampiasa rehetra mbola tsy nanapa-kevitra ny hanokatra kaonty amin'ny tambajotra sosialy microbloggin. Ny Twitter dia te-hampitsahatra ny fanararaotana sy ny fanorisorenana izay mandeha amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy vorona. Hanombohana azy ireo dia handefa rafitra vaovao hisorohana ireo mpampiasa taloha efa noroahina hiala ny lampihazo tsy hanokatra kaonty vaovao hanohizana ny fampiasana azy io amin'ny fomba ratsy.
Rehefa mitady atiny isika, ny valiny misy atiny mora tohina dia tsy haseho, indrindra ireo kaonty nosakananay, nangina noteneninay ho fanararaotana, na dia azon'izy ireo atao aza ny mijery ny atiny voasakana arak'ireo masontsivana voalaza etsy ambony, raha tian'izy ireo. Mba hiezaka hanatsara ny atiny aseho amin'ny tambajotra sosialy, Twitter hanafina ireo bitsika ratsy kalitao manararaotra manohitra olona na mampiseho ambaratongam-panorisorenana, na dia toy ny tamin'ny refy voalohany aza, ity karazana bitsika voasakana ity dia azo aseho araka ny sitrapon'ny mpampiasa ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Twitter dia handefa fepetra vaovao telo hisorohana ny fanorisorenana ao amin'ny tambajotra sosialy
Apple dia nanambara ny New BeatsX hanomboka ny 10 Febroary
Ny Apple Watch no hany smartwatch amidy